သင်တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးလောက်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ကား 12 စီး | CarsDB
သင်တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးလောက်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ကား 12 စီး
MyanmarCarsDB ရဲ့ စာဖတ်သူများအတွက် ဒီဇိုင်းထူးထူးခြားခြား ကား ၁၂ စီးကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.။
1. 1970 FERRARI PININFARINA 512 S MODULO
ဒီကားဟာ ထုတ်လုပ်ဖူးသမျှ Ferrari ကားတွေထဲမှာ အထူးဆန်းဆုံး ဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကားလို့ ဆိုရပါမယ်.။ ဒီကားကို 1970 Genova Motor Show အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီဇိုင်းကို ပုံမှာ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့ကားဆိုတာ သိနိုင်မှာပါ.။ ဒီကားဟာ နိုင်ငံတကာမှပေးအပ်တဲ့ ဆုတံဆိပ် 22 ခု ရရှိခဲ့ပေမယ့် ဈေးကွက်အတွင်း ဘယ်တော့မှ ရောက်မလာခဲ့တဲ့ ကားလဲဖြစ်ပါတယ်.။
Concept ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့ ဒီကားကို BMW ရဲ့ design director ဖြစ်တဲ့ Chris Bangle က ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ Germany ကားတွေထဲမှာ မြင်တွေ့နေကျ သမားရိုးကျပုံစံကို ခွဲထွက်ပြီး ထောင့်ချိုးများများနဲ့ ထူးခြားတဲ့ ခေါင်းပုံစံနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ပါကင်ထိုးထားတဲ့ အခြေအနေမှာဆိုရင် ကားရဲ့ စတီယာရင်နဲ့ အခြားပစ္စည်းတွေဟာ ကားရဲ့ အလည်ဗဟိုနေရာကို ရွှေ့ပေးထားပါတယ်.။ ကားမောင်းသူရဲ့ ကားထဲကို အဝင်အထွက်အဆင်ပြေစေဖို့ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်.။
3. 2010 PORSCHE 918 SPYDER CONCEPT CAR
ဒီကားဟာ 2010 Geneva Motor Show မှာ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ကားရဲ့ အရှေ့အနောက်မှာပါဝင်တဲ့ ဘီးဝင်ရိုးတွေမှာ လျှပ်စစ်မော်တာတွေ တပ်ဆင်ထားခြင်းပါပဲ.။ ဒီမော်တာတွေကတဆင့် ကားအတွက် မြင်းကောင်ရေ 218 ကောင်အား ပိုမိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်.။ ကားရဲ့ မူလအင်ဂျင်ကို 3.4 liter, V-8, 500 horsepower အသုံးပြုပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်.။ ဒါ့အပြင် ဒီကားမှာ စတီယာရင်ရဲ့ အောက်ဘက်နားမှာ ခလုတ်တစ်ခုလဲ အပိုပါဝင်ပါသေးတယ်.။ ဒီခလုတ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ ကားရဲ့ မောင်းနှင်နေမှုပုံစံနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်ပြီး မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ Mode (၄) မျိုးကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်.။
1935 BUGATTI TYPE 57S ကို 1935 Paris Auto Show မှာ ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီ Show ဟာ အခုတော့ ဆက်လက်မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး.။ 57S ဟာ 57 ထက် တစ်ဆင့်နိမ့်တဲ့ version ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်ရဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ အဝါရောင်အရစ်များ ပါဝင်ပါတယ်.။ ဒါ့အပြင် နိမ့်နေတဲ့ ကားရဲ့ ဒီဇိုင်းကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အနောက်ဘက်ဘီးတွေရဲ့ ဝင်ရိုးကို အနောက်ဘက်သိုလှောင်ခန်းကို ဖောက်ထွက်ပြီး တည်ဆောက်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်.။ သမိုင်းတစ်လျှောက် စုစုပေါင်း အစီးရေ 43 စီးသာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်.။
5. AURORA SAFETY CAR
ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Alfredo Juliano တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာ ကားမောင်းသူနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှလူတွေကို ဘေးကင်းစေရေးကို အဓိကထားပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံး Safety Belt လို့ခေါ်တဲ့ ခါးပတ်ပါဝင်တဲ့ ကားတွေထဲက တစ်စီးဖြစ်ပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ်လို ကြိုးခါးပတ်မဟုတ်ဘဲ ရိုလာကိုစတာတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ သံခါးပတ်တန်းကြီးလို ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားရဲ့ နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ အချက်ကတော့ ကားရေယက်တံတွေမလိုအပ်အောင် ဆိုပြီး ကားရဲ့လေကာမှန်ကို အဝိုင်းပတ်လည်ပုံစံ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲ ဒီကားဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက်အရုပ်အဆိုးဆုံး ကားတွေထဲက တစ်စီးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်.။
1932 Ford Speedster ဟာ တစ်ချိန်က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Model T ရဲ့ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်များထဲမှ တစ်စီးဖြစ်ပါတယ်.။ Ford ရဲ့ ဒီဇိုင်နာ Eugene Gregorie နဲ့ တည်ထောင်သူ Henry Ford ရဲ့ သားဖြစ်သူ Edsel Ford တို့ ပူးပေါင်းတည်ထွင်ခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာ ရှည်လျားပြီး အောက်ပိုင်းနိမ့်တဲ့ ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားမှာ V-8 အင်ဂျင် ပါဝင်ပြီး နောက် ဆယ်စုနှစ်များစွာအကြာမှာ Standard Feature ဖြစ်လာမယ့် Start ခလုတ်ပါဝင်တဲ့ ကားတစ်စီးလဲဖြစ်ပါတယ်.။
7. 1936 STOUT SCARAB
1936 STOUT SCARAB ဟာ သင်မြင်ဖူးသမျှထဲမှာ အထူးခြားဆုံးဒီဇိုင်းရှိတဲ့ ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားကို ဒီဇိုင်းဖန်တီးခဲ့သူက တော့ William Stout ဖြစ်ပါတယ်.။ သူဟာ အစပထမတုန်းက လေယာဉ်ဒီဇိုင်းတွေကို တည်ဆောက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကားလုပ်ငန်းဘက်ကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သူပါ.။ Stout Air lines ဟာ လေယာဉ်ပေါ်မှာ အစားအသောက်ကျွေးခြင်း၊ လေယာဉ်မယ်များ ထည့်သွင်းခြင်း စသည်တို့ကို ပထမဆုံး စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ဒီလုပ်ငန်းက အောင်မြင်မှုပုံစံများကို မော်တော်ယာဉ်လိုင်းဘက်မှာ ထည့်သွင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်.။ Stout Scarab ဟာ ကားပေါ်မှာ အစားအသောက်စားနိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုး တည်ထွင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်.။ ကားရဲ့ ကြီးမြင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းကြောင့် ဒီကားဟာ အောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘဲ အစီးရေ ၁၀ စီးသာ ထုတ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်.။
8. MAZDA NAGARE CONCEPT CAR
ဒီကားဟာ 2006 Los Angeles Auto Show မှာ စတင်ပြသခဲ့တဲ့ Concept ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်.။ Mazada ကုမ္ပဏီရဲ့ နောက်ထပ်ထုတ်လုပ်မယ့် ကားတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စရပ်တွေကို လေ့လာစူးစမ်းနိုင်ဖို့ ဒီကားကို အစမ်းသဘောမျိုး ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားကို ထုတ်လုပ်စဉ်မှာ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ ကားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အပြောင်းအလဲတွေကို သတိထားမှတ်သားပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်.။ ဒီကားရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ကားဘီးတွေဟာ ကြီးမားပြီး ကားနဲ့တစ်သားတည်းဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုး တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒါကြောင့်ပဲ ကားရဲ့ဒီဇိုင်းဟာ ထူးခြားနေပြီး အမြင်ဆန်းတဲ့ကားတစ်စီးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်.။
9. 1942 OEUF ÉLECTRIQUE
ဒီကားဟာ ဘီးပေါ်မှာ ဥတစ်လုံးကို တင်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားကိုထုတ်လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ လောင်စာဆီဟာ ကားတွေအတွက် အဓိကလောင်စာဖြစ်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် ဒီကားကိုတော့ လျှပ်စစ်နဲ့ပဲ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.။ ဘီးသုံးဘီးပဲ ပါဝင်တဲ့ ဒီကားဟာ ပုံသဏ္ဍန်အထူးခြားဆုံး ကားတစ်စီးဖြစ်ပြီး အဲဒီခေတ်က ကားလောကမှာ စတင်ခေတ်စားလာပြီဖြစ်တဲ့ သတ္တုနဲ့ မှန်ကို တွဲဖက်အသုံးပြုတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုး စတင်အသုံးပြုထားတဲ့ ကားတစ်စီးလဲဖြစ်ပါတယ်.။
10. 1965 DODGE DEORA CONCEPT CAR
အမြင်နဲ့တင် ဒီကားဟာ တော်တော်လေးထူးခြားပြီး ရုပ်ဆိုးတဲ့ကားဆိုတာ သိသာစေပါတယ်.။ ဒီကားရဲ့ အထူးခြားဆုံးအချက်ကတော့ ဒီကားမှာ တံခါးပေါက်တွေမပါဝင်ခြင်းပါပဲ.။ တံခါးတွေမပါတဲ့အတွက် ပြတင်းပေါက်ကတော့ ကျော်ဝင်စရာမလိုပါဘူး.။ ကားရဲ့ ရှေ့ဘက်အပေါက်ဟာ ပါးစပ်ဟသလို ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပြန်မပိတ်ခင် ကားမောင်းသူက အမြန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားရဲ့ အင်ဂျင်ကို 2.8 liter, Slant-6 အင်ဂျင်အသုံးပြုထားပြီး ဂီယာ ၃ ချက်ထိုး အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားကို နောက်ဆုံးရောင်းချခဲ့တာကတော့ 2009 ခုနှစ်မှာဖြစ်ပြီး လေလံဈေး $225,000 ရရှိခဲ့ပါသတဲ့.။
11. 1948 TASCO
ဒီကားဟာလဲ သင်မြင်ဖူးသမျှမှာ တော်တော်လေးထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.။ ဒီကားဟာ American Sports Car Company ရဲ့ Brand အဖြစ် ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကားတစ်ပိုင်း၊ လေယာဉ်တစ်ပိုင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်.။ ကားကို ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Beech Aircraft Company နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ ဖြစ်ပေမယ့် ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး.။
12. BMW LOVOS
ကားတွေကို စိတ်ဝင်စားသူတစ်ယောက်ယောက်အနေနဲ့ တစ်ခါမြင်လိုက်တာနဲ့ မမေ့နိုင်မယ့်ကားကတော့ BMW LOVOS ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားရဲ့ ဒီဇိုင်းဟာ ငါးအကြေးခွံတွေလို ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပေါ်ဖို့ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်.။ တံခါးပိတ်ထားချိန်မှာ အကြေးခွံတွေဟာ ပွင့်နေမှာဖြစ်ပြီး တံခါးဖွင့်ချိန်မှာတော့ ထူးခြားတဲ့ပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီကားမှာ အကြေးခွံလို ပစ္စည်းမျိုး 250 ခန့်ပါဝင်ပြီး အကြေးခွံတွေပွင့်နေချိန်မှာ Air Brake အလုပ်ကို လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.။ ကားရဲ့ ဘီးတွေမှာလဲ အကြေးခွံ 12 ခုပါဝင်ပါတယ်.။ ဒီအကြေးခွံတွေဟာ ကားမောင်းနှင်နေချိန်မှာ ဘီးနဲ့ လမ်းအကြား ကပ်နေအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.။
MyanmarCarsDB ရဲ့ စာဖတျသူမြားအတှကျ ဒီဇိုငျးထူးထူးခွားခွား ကား ၁၂ စီးကို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ.။
ဒီကားဟာ ထုတျလုပျဖူးသမြှ Ferrari ကားတှထေဲမှာ အထူးဆနျးဆုံး ဒီဇိုငျးနဲ့ ထုတျလုပျထားတဲ့ ကားလို့ ဆိုရပါမယျ.။ ဒီကားကို 1970 Genova Motor Show အတှကျ ရညျရှယျထုတျလုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ ဒီဇိုငျးကို ပုံမှာ ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ တျောတျောထူးဆနျးတဲ့ကားဆိုတာ သိနိုငျမှာပါ.။ ဒီကားဟာ နိုငျငံတကာမှပေးအပျတဲ့ ဆုတံဆိပျ 22 ခု ရရှိခဲ့ပမေယျ့ စြေးကှကျအတှငျး ဘယျတော့မှ ရောကျမလာခဲ့တဲ့ ကားလဲဖွဈပါတယျ.။
Concept ကားတဈစီးဖွဈတဲ့ ဒီကားကို BMW ရဲ့ design director ဖွဈတဲ့ Chris Bangle က ဖနျတီးခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ Germany ကားတှထေဲမှာ မွငျတှနေ့ကြေ သမားရိုးကပြုံစံကို ခှဲထှကျပွီး ထောငျ့ခြိုးမြားမြားနဲ့ ထူးခွားတဲ့ ခေါငျးပုံစံနဲ့ ထုတျလုပျထားတာဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားရဲ့ ထူးခွားခကျြကတော့ ပါကငျထိုးထားတဲ့ အခွအေနမှောဆိုရငျ ကားရဲ့ စတီယာရငျနဲ့ အခွားပစ်စညျးတှဟော ကားရဲ့ အလညျဗဟိုနရောကို ရှပေ့ေးထားပါတယျ.။ ကားမောငျးသူရဲ့ ကားထဲကို အဝငျအထှကျအဆငျပွစေဖေို့ ဒီလိုလုပျဆောငျပေးထားတာဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ.။
ဒီကားဟာ 2010 Geneva Motor Show မှာ ထုတျဖျောပွသခဲ့တဲ့ ကားတဈစီးဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားရဲ့ ထူးခွားခကျြကတော့ ကားရဲ့ အရှအေ့နောကျမှာပါဝငျတဲ့ ဘီးဝငျရိုးတှမှော လြှပျစဈမျောတာတှေ တပျဆငျထားခွငျးပါပဲ.။ ဒီမျောတာတှကေတဆငျ့ ကားအတှကျ မွငျးကောငျရေ 218 ကောငျအား ပိုမိုထုတျပေးနိုငျပါတယျ.။ ကားရဲ့ မူလအငျဂငျြကို 3.4 liter, V-8, 500 horsepower အသုံးပွုပေးထားတာတှရေ့ပါတယျ.။ ဒါ့အပွငျ ဒီကားမှာ စတီယာရငျရဲ့ အောကျဘကျနားမှာ ခလုတျတဈခုလဲ အပိုပါဝငျပါသေးတယျ.။ ဒီခလုတျရဲ့ လုပျဆောငျခကျြကတော့ ကားရဲ့ မောငျးနှငျနမှေုပုံစံနဲ့ ပတျဝနျးကငျြကို လိုကျပွီး မောငျးနှငျနိုငျတဲ့ Mode (၄) မြိုးကို ပွောငျးလဲပေးနိုငျပါတယျ.။
1935 BUGATTI TYPE 57S ကို 1935 Paris Auto Show မှာ ပွသခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ ဒီ Show ဟာ အခုတော့ ဆကျလကျမလုပျဖွဈတော့ပါဘူး.။ 57S ဟာ 57 ထကျ တဈဆငျ့နိမျ့တဲ့ version ဖွဈပွီး အငျဂငျြရဲ့ တဈဖကျတဈခကျြမှာ ထူးဆနျးတဲ့ အဝါရောငျအရဈမြား ပါဝငျပါတယျ.။ ဒါ့အပွငျ နိမျ့နတေဲ့ ကားရဲ့ ဒီဇိုငျးကို တညျဆောကျဖို့အတှကျ အနောကျဘကျဘီးတှရေဲ့ ဝငျရိုးကို အနောကျဘကျသိုလှောငျခနျးကို ဖောကျထှကျပွီး တညျဆောကျထားရတာဖွဈပါတယျ.။ သမိုငျးတဈလြှောကျ စုစုပေါငျး အစီးရေ 43 စီးသာ ထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ.။
ကကျသလဈဘုနျးတျောကွီးတဈပါးဖွဈတဲ့ Alfredo Juliano တညျဆောကျခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာ ကားမောငျးသူနဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှလူတှကေို ဘေးကငျးစရေေးကို အဓိကထားပွီး တညျဆောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ ပထမဆုံး Safety Belt လို့ချေါတဲ့ ခါးပတျပါဝငျတဲ့ ကားတှထေဲက တဈစီးဖွဈပါတယျ.။ ဒါပမေယျ့ ဒီနခေ့တျေလို ကွိုးခါးပတျမဟုတျဘဲ ရိုလာကိုစတာတှမှော ပါဝငျတဲ့ သံခါးပတျတနျးကွီးလို ပုံစံမြိုးဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားရဲ့ နောကျထပျထူးခွားတဲ့ အခကျြကတော့ ကားရယေကျတံတှမေလိုအပျအောငျ ဆိုပွီး ကားရဲ့လကောမှနျကို အဝိုငျးပတျလညျပုံစံ ပွုလုပျထားတဲ့ အခကျြပဲဖွဈပါတယျ.။ ဒီအခကျြတှကွေောငျ့ပဲ ဒီကားဟာ သမိုငျးတဈလြှောကျအရုပျအဆိုးဆုံး ကားတှထေဲက တဈစီးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ.။
1932 Ford Speedster ဟာ တဈခြိနျက အောငျမွငျခဲ့တဲ့ Model T ရဲ့ နောကျဆုံးမြိုးဆကျမြားထဲမှ တဈစီးဖွဈပါတယျ.။ Ford ရဲ့ ဒီဇိုငျနာ Eugene Gregorie နဲ့ တညျထောငျသူ Henry Ford ရဲ့ သားဖွဈသူ Edsel Ford တို့ ပူးပေါငျးတညျထှငျခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာ ရှညျလြားပွီး အောကျပိုငျးနိမျ့တဲ့ ကားတဈစီးဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားမှာ V-8 အငျဂငျြ ပါဝငျပွီး နောကျ ဆယျစုနှဈမြားစှာအကွာမှာ Standard Feature ဖွဈလာမယျ့ Start ခလုတျပါဝငျတဲ့ ကားတဈစီးလဲဖွဈပါတယျ.။
1936 STOUT SCARAB ဟာ သငျမွငျဖူးသမြှထဲမှာ အထူးခွားဆုံးဒီဇိုငျးရှိတဲ့ ကားတဈစီးဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားကို ဒီဇိုငျးဖနျတီးခဲ့သူက တော့ William Stout ဖွဈပါတယျ.။ သူဟာ အစပထမတုနျးက လယောဉျဒီဇိုငျးတှကေို တညျဆောကျပေးခဲ့သူဖွဈပွီး နောကျပိုငျးမှာ ကားလုပျငနျးဘကျကို ရှပွေ့ောငျးခဲ့သူပါ.။ Stout Air lines ဟာ လယောဉျပျေါမှာ အစားအသောကျကြှေးခွငျး၊ လယောဉျမယျမြား ထညျ့သှငျးခွငျး စသညျတို့ကို ပထမဆုံး စတငျလုပျကိုငျခဲ့တဲ့ လုပျငနျးဖွဈပွီး ဒီလုပျငနျးက အောငျမွငျမှုပုံစံမြားကို မျောတျောယာဉျလိုငျးဘကျမှာ ထညျ့သှငျးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ.။ Stout Scarab ဟာ ကားပျေါမှာ အစားအသောကျစားနိုငျတဲ့ ဒီဇိုငျးမြိုး တညျထှငျဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ.။ ကားရဲ့ ကွီးမွငျ့တဲ့ စြေးနှုနျးကွောငျ့ ဒီကားဟာ အောငျမွငျမှုမရခဲ့ဘဲ အစီးရေ ၁ဝ စီးသာ ထုတျလုပျခဲ့ရပါတယျ.။
ဒီကားဟာ 2006 Los Angeles Auto Show မှာ စတငျပွသခဲ့တဲ့ Concept ကားတဈစီးဖွဈပါတယျ.။ Mazada ကုမ်ပဏီရဲ့ နောကျထပျထုတျလုပျမယျ့ ကားတှအေတှကျလိုအပျတဲ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး ကိစ်စရပျတှကေို လလေ့ာစူးစမျးနိုငျဖို့ ဒီကားကို အစမျးသဘောမြိုး ထုတျလုပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားကို ထုတျလုပျစဉျမှာ အငျဂငျြနီယာတှဟော ကားကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာမယျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ အပွောငျးအလဲတှကေို သတိထားမှတျသားပွီး တညျဆောကျခဲ့ပါတယျ.။ ဒီကားရဲ့ ထူးခွားခကျြကတော့ ကားဘီးတှဟော ကွီးမားပွီး ကားနဲ့တဈသားတညျးဖွဈနတေဲ့ ပုံစံမြိုး တညျဆောကျထားတာဖွဈပါတယျ.။ ဒါကွောငျ့ပဲ ကားရဲ့ဒီဇိုငျးဟာ ထူးခွားနပွေီး အမွငျဆနျးတဲ့ကားတဈစီးအဖွဈသတျမှတျခံရတာဖွဈပါတယျ.။
ဒီကားဟာ ဘီးပျေါမှာ ဥတဈလုံးကို တငျထားတဲ့ပုံစံဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားကိုထုတျလုပျတဲ့ အခြိနျမှာ လောငျစာဆီဟာ ကားတှအေတှကျ အဓိကလောငျစာဖွဈနပွေီဖွဈပမေယျ့ ဒီကားကိုတော့ လြှပျစဈနဲ့ပဲ ထုတျလုပျထားတာဖွဈပါတယျ.။ ဘီးသုံးဘီးပဲ ပါဝငျတဲ့ ဒီကားဟာ ပုံသဏ်ဍနျအထူးခွားဆုံး ကားတဈစီးဖွဈပွီး အဲဒီခတျေက ကားလောကမှာ စတငျခတျေစားလာပွီဖွဈတဲ့ သတ်တုနဲ့ မှနျကို တှဲဖကျအသုံးပွုတဲ့ ဒီဇိုငျးမြိုး စတငျအသုံးပွုထားတဲ့ ကားတဈစီးလဲဖွဈပါတယျ.။
အမွငျနဲ့တငျ ဒီကားဟာ တျောတျောလေးထူးခွားပွီး ရုပျဆိုးတဲ့ကားဆိုတာ သိသာစပေါတယျ.။ ဒီကားရဲ့ အထူးခွားဆုံးအခကျြကတော့ ဒီကားမှာ တံခါးပေါကျတှမေပါဝငျခွငျးပါပဲ.။ တံခါးတှမေပါတဲ့အတှကျ ပွတငျးပေါကျကတော့ ကြျောဝငျစရာမလိုပါဘူး.။ ကားရဲ့ ရှဘေ့ကျအပေါကျဟာ ပါးစပျဟသလို ပှငျ့သှားမှာဖွဈပွီး ပွနျမပိတျခငျ ကားမောငျးသူက အမွနျဝငျရမှာဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားရဲ့ အငျဂငျြကို 2.8 liter, Slant-6 အငျဂငျြအသုံးပွုထားပွီး ဂီယာ ၃ ခကျြထိုး အမြိုးအစားဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားကို နောကျဆုံးရောငျးခခြဲ့တာကတော့ 2009 ခုနှဈမှာဖွဈပွီး လလေံစြေး $225,000 ရရှိခဲ့ပါသတဲ့.။
ဒီကားဟာလဲ သငျမွငျဖူးသမြှမှာ တျောတျောလေးထူးခွားတဲ့ဒီဇိုငျး ဖွဈပါလိမျ့မယျ.။ ဒီကားဟာ American Sports Car Company ရဲ့ Brand အဖွဈ ထုတျလုပျခဲ့တာဖွဈပွီး ကားတဈပိုငျး၊ လယောဉျတဈပိုငျးလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ.။ ကားကို ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ ရညျရှယျခကျြကတော့ Beech Aircraft Company နဲ့ စာခြုပျခြုပျဆိုဖို့ ဖွဈပမေယျ့ ကုမ်ပဏီရဲ့ ရညျရှယျခကျြမအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး.။
ကားတှကေို စိတျဝငျစားသူတဈယောကျယောကျအနနေဲ့ တဈခါမွငျလိုကျတာနဲ့ မမနေို့ငျမယျ့ကားကတော့ BMW LOVOS ပဲဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားရဲ့ ဒီဇိုငျးဟာ ငါးအကွေးခှံတှလေို ပုံစံမြိုး ဖွဈပျေါဖို့ တညျဆောကျထားတာဖွဈပါတယျ.။ တံခါးပိတျထားခြိနျမှာ အကွေးခှံတှဟော ပှငျ့နမှောဖွဈပွီး တံခါးဖှငျ့ခြိနျမှာတော့ ထူးခွားတဲ့ပုံစံတှကေို ပွောငျးလဲသှားမှာဖွဈပါတယျ.။ ဒီကားမှာ အကွေးခှံလို ပစ်စညျးမြိုး 250 ခနျ့ပါဝငျပွီး အကွေးခှံတှပှေငျ့နခြေိနျမှာ Air Brake အလုပျကို လုပျပေးမှာဖွဈပါတယျ.။ ကားရဲ့ ဘီးတှမှောလဲ အကွေးခှံ 12 ခုပါဝငျပါတယျ.။ ဒီအကွေးခှံတှဟော ကားမောငျးနှငျနခြေိနျမှာ ဘီးနဲ့ လမျးအကွား ကပျနအေောငျ ဆောငျရှကျပေးမှာဖွဈပါတယျ.။
Posted at: 30-06-2015 14:40 PM